Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Ka Digtoonow Dulmi Ugu Adeegida Rabitaanka Madaxda
Danta guud ma ahan aragtida ay madaxdu u adeegsaneyso meelmarinta maslaxada guud. Dadka qaar ayaa si caqliga ka baxsan u rumeysan go’aanada ay qaatan hogaamiyeyaasha ay taageersan yihiin iney tahay mid loogu adeegayo maslaxada guud ee ummadda, kuwaas oo si xagjirnimo leh u difaacaya hogaamiyeyaashooda xataa haddii ay arkayaan in inta badan ay kala soo horjeedaan mucaaradnimo maangal ah. Dareenka ay qabaan dadkaas waa mid sii kala fogeyneysa shacabka iyo madaxdooda, abuureysana nacabtooyo lagu beegsanayo dadka ka soo horjeeda xamaasada indhali’ida lagu taageeryo hogaamiyeyaasha dowladda.
Siyaasad ahaan dalku waa inuu u madaxbanaan yahay ismaamulkiisa, xorna uu ka yahay faragelin dibadeed oo uusan dooneyn, sida dadkiisu rabana uu uga taliyo aayahooda. Danta guud waa maslaxada waxtarkeeda ay dhamaan kawada faa’iideysanayaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogaan dalkooda ama ay aragti mideysan ku wadaagaan qiimaha ay ka aaminsan yihiin maslaxooyinka wadarta guud dantooda ah, sida Islaanimadooda, dhaqankooda, Soomaalinimadooda, taariikhda jiritaanka halgankooda, astaanta qarankooda, sheekooyinkooda beenhawaaska ah, iyo siyaasada dhaqan-dhaqaale oo dalkoodu horumarinta ku hiigsanayo.
Danta guud ee ummad kasta waxey salka ku haysa aragtida lagu hogaaminayo dadka in lagu saleeyo rabitaankooda guud iyo talowadaag in go’aamada dalka lagu wada gaaro. Dhowrista jiritaan maamulka dowlada iyo ku shaqeynta dastuurka dalka u degsan ayaa ka mida maslaxada guud ee ummadda, kuwaas oo dhaqangalkoodu xambaarsan yahay xamaasad iyo dareen kalcaltooyo oo loo qabo hilowga dalka hooyo iyo guulaha d u soo hoyda. Siyaasadda bulshada ayaa lagu cabiraa hormarinta qeybaha kala duwan ee wanaajinta maslaxada guud sida, nabada, amniga, cadaaladda, wadanoolaashaha, midnimada, iyo sinaanta ama kobcinta aqoonta, daryeelka dadka, iyo dhowrista xuquuqda dadka ama xoriyad ku noolaashaha, heybad iyo sharaf ku dhaqanka, hanti lahaanshaha, Hiigsiga farxada, barwaaqeynta dhaqaalaha, ku noolaashaha nolol tayo wanaagsan, horseedida siyaasad madaxbanaan, hiigsiga bulsho dimoqaraadiya, iyo furitaanka suuqyo xor ah ama helida maciishad la awoodo qiimaheeda, abuuris shaqooyin mushaarkoodu sareeyo, soo saarid badeecooyin tayo leh, daryeelka caafimaadka guud, hirgelinta mashruucyada lagu dhisayo adeegyada aasaasiga ah, iyo difaac guud.
Waxaa aad u adag si loola doodo ama isfaham loola gaaro dadka aqoontooda siyaasadeed ay ka maqan tahay xeerarka ay wax ku garwaaqsadaan, waxeyna dadkaas si indho la’aana oo ismiidaamina uga falcelinayaan dareenkooda xoogan oo ay u qabaan jaceylka hogaamiyeyaashooda, qabiilkooda, dhaqankooda, diintooda, jinsigooda, fikirka kooxdooda, iyo naceybka ay u hayaan cidii aan la qabin qabka ay isku heystaan. Dadkaas waxaa maankooda dooriya wadaadada maskaxdoodu ku maqan tahay ka ag dhowaashaha madaxda dowladda iyo ku dul noolaashaha hantida dowladda. Sidoo kale waxaa dadkaas kuwooda dhaliyarada ah mariin habaabiya maskaxdooda brobagaandada iyo beenhawaaska ay madaxda siyaasadeed ay ugu dabaaldegayaan xaflado loo ekeysiinayo iney ka mid yihiin waxqabadka dowladda, iyagoo goobahaas lagu xayeysiinayo dowladda lagu soo camirayo shaqaale ay xigto dhow ahaan u shaqaaleeyeen.
Dastuurka saxda ah wuxuu salka ku hayaa maslaxada danta guud, laakiin kan ay ku maamushaan kooxda hogaamisa madaxtooyada Soomaaliya wuxuu ku qotomaa meelmarinta dastuurkooda gaar ahaaneed oo u hawlgelaya fulinta rabitaanka hogaamiyahooda iyo in dowladu si dhaqan adoonimo leh ugu adeegto danaha gaarka ah, danaha kooxaha isbaheysiga kula jira, shisheeyaha hantida looga doorsado meelmarinta danahooda, iyo maalgelinta dadaalada lagu bixinayo caburinta lagu doonayo dadka in lagu hoos keeno u hogaansamida iyo u guulwadeynta madaxda dowladda oo ay ku helayaan gaarida danahooda gaarka ah. Hogaamiyaha wanaagsan wuxuu leeyahay geesinimo uu naftiisa ku dhaqayo sharciga uu doonayo inuu ku maamulo shacabkiisa, wuxuuna dadkiisa ugu adeega isaga oo maslaxada guud ka hormarinaya midiisa gaar ahaneyd, waxaana sidaas si la mida looga baahan yahay dadka inuusan ku qasbin fikirka kooxdiisa iyo aragtidiisa siyaasadeed iney mucaarad la’aan ku raacaan ama ay xer u noqdaan hogaamintiisa.
Talada dalka siyaasada lagu hogaaminayo kooxna si gaara uma leh iney ku daneysato ama ay ku takrifasho awoodeeda, kuwa kalana ay caburiso oo ay siyaasadda dalka dibed jog uga dhigto. Khatar weyn waxey ka dhalaneysaa isku dayga madaxda dowladu ay ku tijaabineyso weerarada hubeysan oo ay ku bartilmaameysaneyso mucaaradka, iyagoo u bareeraya daadinta dhiigooda, dilka naftooda, boobka maalkooda, sharafdilka karaamada shaqsiyadooda. Masuuliyad
xumada lagu beegsanayo dadka ka soo horjeeda siyaasad xumada madaxda dowladda waxey halis gelineysaa amniga iyo degenaanshaha dalka, waxeyna dib u curineysaa halgamo hubeysan oo mar kale halis dib u geliya jiritaanka dowlada dalka. Waxaa qalada in mucaaradka lagu eedeeyo iney dalal shisheeye hanti ka helaan islamarkaasna kooxda talada haysa laftoodu ay dhaqaalo ka hesho wadamo shisheeye. Caalamka waa wax ka caadiya in kooxaha iyo wadamada ka dhexeeyo isbaheysi fikradeed ay isku taakuleeyaan maal, muruq, iyo maskaxba. Isku gurmadka siyaasadeed iyo midka istaakuleyneyd ee gudaha iyo debeda dalka ka wada jira waa habdhaqan ku saleysan xiriir iskaashi caalamiya. Haddii ay jirto diidmooyin looga soo horjeedo lacagaha shisheeyuhu dalka soo gelinayaan waa in baarlamaanka la hor geeyo sharciyo lagu xakameynayo adeegsiga lacageed ee danaha shisheeye, taasna ay noqoto mid si siman u wada saameysa mucaaradka, muxaafadka, iyo madaxda dowladda, laakiin aysan noqon in lacagta ay kala daneysiga siyaasadeed ku helaan kooxda ka arrimisa madaxtooyada iney ahaato mid wadaniya, meesha kuwa ay helaan mucaaradka loo arkayo qaran dumis.
Musharax madaxweyne Mudane C/Rahaman C/Shakuur Warsame waxaa loo geystey gaboodfal ujeedadiisu ay ahayd in lagu dilo si fariin argagaxgelina loogu diro mucaaradka faraha badan ee ka soo horjeeda madaxda ku fashilantay hogaaminta dalka. Falkaas madaxweynuhu geystey waa dagaal bilowgiis, hasa yeeshee ninkey rabtaba ha u roonaate la arki doono ninkii roora iyo ninkii raaga. Tacadiyada loo geysto siyaasiyiinta mucaaradka waa xumaanta ugu sareysa ee muujineysa ku tumashada xuquuqda dadka rayidka ah, waxeyna u tahay astaan muuqata oo aan looga ilduufeyn habdhaqanka kelitalisnimada. Madaxda dowladda iyo xerta ay waraabsadaan waxey hanti badan geliyaan isxayeysiin, kireysiga dhalinyaro baraha bulshada uga guulwadeeya, laaluush ku bixin lagu aamusinayo warbaahinta madaxabanaan iyo xildhibaanada Baarlamaanka, waxeyna dadka ka soo horjeeda isugu dareen borobagaando lagu bahdilayo karaamada iyo sharaftooda shaqsiyadeed, cadaadin meheradeed, bartilmaameysi beeleed, caburin siyaasadeed, ka takoorid adeegyada dowladda, si xun ula macaamilid garoomada laga dhoofo, iska daba wareejinta lagu hayo diiwaangelinta xisbiyadooda siyaasadeed, qiilal lagu baneysanayo dabagalka lagu gelinayo xabsiguri, iyo u adeegsiga cidamada qaranka iyo hubka dowlada oo dilal qorsheysan loogu beegsado naftooda iyo boobka loo geysto hantidooda.
Hogaamiyeyaasha dowladda oo haysta awooda ugu badan dowladda, hantida qaranka iyo mida sida dadban ay u helaan, iyo lacago fara badan oo ay ka helaan dibeda iyo shisheeyaha ayaa dhumiyey kalsoonida dadweynaha, markaas ayey kalsoonidarrada la soo gudboonaatey si ay qiil ugu helaan waxey si qaldan uga dareen celiyeen niyadjabkooda, iyagoo eeda dusha ka saaray mucaarad aan hubeysneyn oo aan heysan hanti badan, laakiin ku guuleystey iney helaan taageerada shacabka iyo xiriirada iskaashiga dibeda. Shacabka Soomaaliyeed ha ka qeybqaataan dadaalada loogu jiro dhagaxtuurka siyaasadeed iyo xilkatuurista madaxda ku guuldareysatay hogaaminta dalka. Taladu waxey mudan tahay in la tuuro madaxda fashilantay inta aysan dalka ka bilaaban isugaarsi horseeda dibucurashada dagaal sokeeye.